Sekungamakhulu eminyaka isintu ibheka izindlela ngokushesha ukwelapha izifo. Futhi kuze kube manje, kukhona ngezigaba ezintathu eziyinhloko izindlela ezisetshenziswa: wesimanje, bendabuko kanye non-bendabuko.
Zabolev, kuqala ubheke odokotela zakudala ezasekela ubhala kadokotela futhi uchaza eziyalezweni ekwelapheni isifo esithile.
Kodwa, ngaphezu izidakamizwa, ngokuvamile ziphendukela "ugogo" efakazelwe: ukwenziwa chamomile, ikhuphuka imilenze noma udle cranberry ngoju.
Futhi lapho zonke izindlela wazama ephendukela abelaphi nabathakathi. Nezinkanyezi ngenkolelo yokuthi bazokwazi ukusiza lapho imithi ayinamandla.
imithi Classical. Izinzuzo nezingozi nebubi
Olusekelwe Ebufakazini (yesimanje) imithi, akungabazeki, azuzwe kakhulu: ukuhlinzwa, yokusiza umuntu ukuba aphefumule, izindlela eziphumelelayo zokubhekana nayo mass kubhubhane futhi izifo ezingathi sína kwababhemayo. Isifo samaphaphu, waphuka kuyinkimbinkimbi futhi appendicitis ungakwazi neze selaphe ngempumelelo esebenzisa imithi yendabuko.
Nokho, kukhona nje plus kanye lokususa. Futhi liqukethe yokuthi umuthi olusemthethweni ezimweni eziningi ukhathazekile nokuqaleka nobuhlungu. Yebo, kanti isiguli wenelisekile yokuthi ikhanda ayisekho ukhathazekile, wadlula esigabeni acute lesi sifo.
Popular iphilisi eliwumlingo elisha, futhi ekuthola ungenayo impilo enhle, lapho ebhekisela udokotela ungasawusebenzisi.
Imithi engamakhambi, izimiso zawo
Ngesikhathi imithi esemthethweni ngokuvamile wamukele izindinganiso. Kuzo zonke izikhungo, ukuqeqeshwa lodokotela esizayo, sinamathela kuzo ncamashi. Ngakho, konke engamboziwe namazinga, libhekisela imithi yolunye uhlobo.
Yena ufuna izimbangela zezinkinga zezempilo, ukuphazamiseka umzimba, okuholela lesi sifo. Ngaphezu kwalokho, ngokungafani kuya izimiso classical, okuyinto babheka umuntu njengoba umuntu isitho izinhlelo, indlela ababezibheka alithathe iyonke, uyakucabangela ubuhlobo zonke izinhlaka.
Ngu Folk (esivamile) emithi, izindlela eside ziphumelela lasendulo ukwelapha isifo. Kuyinto kubo amakhulu eminyaka wafuna ukuphulukiswa. Isikhathi esiningi wasebenzisa umuthi herbal nezitshalo okwelapha kubandakanya infusions ukulungiselela kanye Iziphungo.
Ngaphezu izidakamizwa ephulukisa esetshenziswa imithandazo kanye kuwo ngemithandazo. Imithandazo kufanele livikelekile emimoyeni emibi, futhi izintelezi uvela zobuqaba, amazwi abo adluliswa ezizukulwaneni ngezizukulwane.
Imithi yokwelapha yesintu yase-Eastern
amasiko Eastern ukufundisa isifo ukuvimbela, ulondoloze impilo futhi ngaleyo ndlela ukunweba ukuphila komuntu. Ifilosofi akuyona kuphela ubunye ngokomoya futhi umzimba wenyama, kodwa ukuze uhlangane nezwe elizungezile. Kwakuphakathi nalesi ngokuvumelana abelaphi bheka lezinkinga.
Folk imithi yolunye uhlobo ngokuvamile ngokuthi enye, bekungenxa ukwelashwa komuntu, kunokuba isifo esithile.
Imithi engamakhambi. Ukuthemba noma cha
Laba balandeli ekwelapheni okuhlukile zithi iphephile futhi isebenza ngempumelelo. Abaningi bakholelwa. Kodwa ukulahla izindlela classical yokwelashwa azinakho zinkulu. isincomo Ndawonye kadokotela ukusebenzisa futhi sifinyelele imithi ehlukile kungenzeka. Kufanele wenze njalo ngokuqapha, njengoba ukusebenza kwe-iningi izindlela iye kancane wafunda, nobufakazi basemtholampilo naye olahlekile.
Noma yimuphi Umtholampilo Omunye umuthi uthembisa ukuqeda zonke izifo, kodwa isiguli ukuba zifune usizo lezi zikhungo kuyinto cishe ngentando yakho, njengoba isiqondiso normative yalo msebenzi engekho.
Kukhona amacala amaningi akugcini nje ngokuba ukukhungatheka, kodwa futhi kulimaze empilweni, ikakhulukazi uma uthola aphoyintimenti quack, ngincoma elinye ithuluzi wezimangaliso noma inqubo. Izinga ikhono odokotela kunzima ukunquma. Ngokuvamile kudingeke ukuba sincike kobufakazi nesineke.
Manje, izikhungo eziningi zinikeza master ukubhula ngokufunda intende physiognomy, graphology, ukubhula ngezinkanyezi - konke noma imithi yolunye uhlobo. Ezemfundo Alternative amasu kwenziwe ezikoleni ezikhethekile noma ukude. Kukholakala ukuthi ukufunda izindlela namasu ekwelapheni okuhlukile kuba eliyinkimbinkimbi kakhulu kunalelo the classic, ngakho yini noma cha ukuthemba izikhungo ezingabazisayo ezinjalo zemfundo noma cha kuyindaba yangasese. Ngeshwa, i-Institute of Omunye umuthi, ekupheleni okuyinto uzonikezwa olusemthethweni idiploma umelaphi kuze nje kumnandi.
Manje e-Russia saqashelwa olusemthethweni kuphela ukutshopa kanye umkhuba kwamathambo. Thola umsebenzi owengeziwe kungaba, uma kukhona imfundo yezokwelapha ekhethekile. Ngokwesibonelo, kuphela neurologists ungakwazi kahle ukutshopa.
amakhambi Folk of East and West
Kunezindawo eziningi imikhuba okunye. Minyaka yonke inani labo ezikhulayo. Ukuze ngandlela-thile ukwenza umqondo lokhu kuhlukahluka ngokunikeza sebezame zokuhlukanisa.
Isigaba sokuqala sihlanganisa izindlela:
I-acupuncture - nemiphumela imizimba yenyama ngokusebenzisa ethize amaphuzu emzimbeni. Lezi zihlanganisa: Su-Jok, hirudotherapy, Reflexology nabanye abaningi;
I-Ayurveda - kuyinto imithi Indian okunye. Luhilela ukwelashwa eziyinkimbinkimbi, esithinta wonke umzimba futhi kuhlanganisa massage, aromatherapy nokuzindla. Kuyadingeka ukuba banamathele Ukudla nokuphuza zezinkambi kwezokwelapha;
yendabuko imithi futhi ahlukahlukene yokutakula izinhlelo - Tibetan, amaVeda, isiShayina;
Ukuhlola Amakhambi Okwelapha - ukusetshenziswa ngemithamo ultra-ongaphakeme izidakamizwa. Inani enkulu yalezi izinto futhi kubangele isifo;
naturopathy - indlela esekelwe imvuselelo ngekhono lomuntu self-ukuphulukiswa futhi alulame. abaqeqeshiwe NIJ imithetho yokuphila enempilo, ngokuya lapho umzimba ngokwawo uzoxazulula zonke izinkinga.
izindlela Bioelectromagnetic yokuchayeka
Ngo eChina yasendulo kwatholakala amaphuzu eziphila abakhuthele. La maphuzu futhi ukutshopa ezaziwayo, kuphela incazelo mayelana 700. ngu inkanuko kubo ngendlela ethile, kungenzeka ukwelapha ezihlukahlukene izifo, kanye lokufeza nokuvinjelwa kwezifo.
Izindlela imithi ehlukile okungokwendlela Eqenjini lesibili, kusho nomthelela amaphuzu eziphila abakhuthele ngu kazibuthe, amasimu kagesi biofields. Futhi kuzakuba ngokuphindwe ukuxilongwa kanye nokwelashwa.
ukwelashwa bioresonance - inkanuko izindawo cortex cerebral, okuyinto banesibopho lokhu noma lelo lungu imvamisa ultra-ongaphakeme pulses kagesi;
electropuncture reflexology - ukushukuma kokutshopa amaphuzu phezu kwesikhumba pulses kagesi;
magnitopunkturu - umthelela kazibuthe, AC noma i-DC;
Imininingwane-asebenzayo izidakamizwa - amanzi noma ukuzilibazisa izidakamizwa, amaseli ukuthi baphathe umzimba Imininingwane okungathiwa "efanele". Kusho Amatebhe futhi abanalo Izimo;
umthelela amatshe Amasimu, izinsimbi kanye izitshalo.
Imithi engamakhambi isebenzisa indlela yokudla ehambisana nempilo eziningi. Ngakho-ke, indlela yesithathu zihlanganisa imifino, macrobiotics, ngokuzila ukudla, izindlela ezehlukene ngokukhishwa kobuthi egazini, ukusetshenziswa izithasiselo zokudla.
Futhi lapha ezihlukahlukene okukhulunywa amasistimu ukudla: Bragg, Shelton, Dyukanu, semenova, Protasov.
Ikhono ukulawula umzimba futhi imizwa - liphinde imithi non-bendabuko. Ukwelashwa Kwenziwa esebenzisa umthelela ukwaziswa okulethwa yizinzwa bese ngokusebenzisa ukunyakaza komzimba. Lokhu - kanti Chinese ukuphefumula izivivinyo, umculo therapy, imishanguzo umbala, aromatherapy ngeso ubuchwepheshe, ukuphulukisa zenkolo, bezibona extrasensory.
Iqembu yesine kuhlanganisa yoga okwengeziwe nokuzindla. Amasu ethandwa futhi eyaziwa kabanzi emhlabeni wonke njengenhlangano imithi Indian okunye.
Izandla njengoba ithuluzi main ekwelapheni
Izindlela ukuthi uphakathi kwabantu abangenalo leli yesihlanu ikakhulu amasu massage. Imithi yendabuko kanye nehlukile ezinqwabelene nakho okukhulu emlandweni kusasele amakhulu eminyaka ubudala. Ngaphezu kwalokho, lezi zindlela zokwelashwa ngosizo isandla udokotela nasemkhakheni wezokwelapha esemthethweni njengoba ngempumelelo ngokwanele.
ukwelashwa Manual - amasu ezikhethekile, udokotela owenza izandla ngawo ukuhlela umsebenzi apharathasi locomotor isiguli;
massage - senzo mechanical phezu Indwangu: i-amalunga, imisipha, isikhumba, ukufeza umphumela ezelaphayo;
acupressure - ukushukuma iminwe amaphuzu eziphila abakhuthele;
Isicelo kwemithi siphinde sihlinzekele nezinhlelo ezihlanganisa imithi yolunye uhlobo. Ukwelashwa Kwenziwa usebenzisa apitherapy, amalungiselelo kwezinto eziphilayo ngesisekelo esebenzisa isilwane noma amaminerali imvelaphi.
Iqembu lesithupha kuhlanganisa lokhu okulandelayo izinhlobo zokwelapha :
Oxygen Kwenziwa ngokuba emangqamuzaneni omzimba ukuthi uhlangabezana hypoxia;
iseli, usebenzisa ama-stem cell;
Umzimba wokusungula umzimba;
antioxidant, okungukuthi, nokuvinjelwa namachibi asemangqamuzaneni omzimba.
Ngaphezu kwalokho, kukhona izindlela ekwelapheni okuhlukile lapho alinakunikezwa kunoma iqembu, ezifana ukubhula ngezinkanyezi, Feng Shui, psihopunktura.
Kuyinto ngokuvamile kungenzeka ukuhlangabezana ukukhangisa abelaphi, abasebenzelana nemimoya nabathakathi nabathakathi. Imbangela sifo bebona khona umonakalo noma ukwenza izenzo umuntu omubi kule nezidlule izimpilo.
Kunemikhakha ezithile noma amazinga zokuphulukisa:
ezingeni lokuqala kukhona abaphulukisi futhi Abelapha, bona kuphela inyama nomzimba wenyama yomuntu;
ezingeni sesibili kuhilela isikhalo emandleni aphakeme ukusiza;
wesithathu - a ngemilingo ngubani bambone ngokoqobo imbangela yezinkinga;
wesine, ezingeni ezingokomoya, kuhilela yokuchayeka iyimbangela zokungajabuli.
Zithanda noma zingathandi, kunzima ukuqinisekisa. Ngo iningi amacala ukuvakashela Mage incike inkolelo lesiguli kuwo.
Ukuxilongwa isimo umzimba
Folk imithi yolunye uhlobo arsenal yayo has amathuluzi amaningi kanye nezindlela yokwelapha kanye ukuhlola.
Ngokuphambene nendlela esemthethweni, ocwaningweni okunye ikuvumela uhlole kwelinye session impilo jikelele kanye ukuhlonza yisiphi isifo futhi kanjani izinkinga zamanje.
Lapho senza izindlela ethandwa ukuxilongwa ngokuzethemba miningi. Nokho, imithi yendabuko ayiboni kubo futhi awusebenzi.
Uma sibheka maphakathi imithi ehlukile, iziguli banganikeza zindlela:
kinezeologiya ukutadisha ukunyakaza imisipha womuntu. Kukholakala ukuthi isitho ngasinye lihlotshaniswa imisipha ethile, ukucacisa degree of ithoni kulo, ungakwazi ukuthola inkinga kanye ayibulale;
iridology ihlola isimo umzimba ku iris;
auriculodiagnostics - uhlelo ihlola amaphoyinti indlebe zangaphandle elihlobene ne kwezitho izinhlelo umzimba;
termopunkturnaya ukuhlola alinganise lokushisa kanye nokuzwela ke endaweni amaphuzu eziphila abakhuthele;
ishayela uphethwe alinganise ishayela kanye correlates ngayo izici isimo izitho zangaphakathi.
Lena akuyona uhlu oluphelele lwazo amasu litholakale imithi yolunye uhlobo. Nokho, kufanele kuqondwe ukuthi bathembele ngokuphelele ukwethembeka akuyona. Futhi uma kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane is kusasetshenziswa, sithola imiphumela engcono ukucacisa izindlela kanye nezindlela imithi esemthethweni.
Connectionfailure: yini leli phutha futhi kanjani ukukulungisa